So Wokae?—December 2016 | Adesua
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mingrelian Mongolian Moore Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uruund Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Bɔne bɛn na na Yesu reka ho asɛm wɔ afotu a ɛwɔ Mateo 18:15-17 no?
Ná ɔreka nsɛmnsɛm a nnipa a ɛfa wɔn ho no ankasa betumi asiesie. Nanso, asɛm no yɛ bɔne a emu yɛ duru a sɛ wɔanhwɛ ansiesie a wobetumi atu obi wɔ ho. Bɔne a yɛreka ho asɛm yi bi ne amimdi anaa ntwatoso a ebetumi asɛe obi din.​—w16.05, kr. 7.
Dɛn na wubetumi ayɛ na ama woanya Bible akenkan so mfaso paa?
Nea wubetumi ayɛ ni: Nka sɛ, nea merekenkan yi mfa me ho. Mmom, hwehwɛ asuade a wubetumi de abɔ wo bra; bisa wo ho nsɛm bi te sɛ ‘Mɛyɛ dɛn de wei aboa afoforo?’; na fa nnwinnade a wowɔ no yɛ nea woakenkan no ho nhwehwɛmu.​—w16.05, kr. 24-26.
Ɛyɛ bɔne sɛ Kristoni a ogye owusɔre di bedi awerɛhow anaa?
Sɛ Kristoni bi gye owusɔre di a, ɛnkyerɛ sɛ sɛ ne biribi wu a, ɔrentumi nni awerɛhow kɛse. Bere a Sara wui no, Abraham gyam no, anaa osuu no. (Gen. 23:2) Bere bi akyi no, awerɛhow no ano bɛbrɛ ase.​—wp16.3, kr. 4.
Ɔbarima a ɔkyerɛwfo toa bɔ n’asen ne mmarima nsia a obiara kura dade a Hesekiel ti 9 ka wɔn ho asɛm no gyina hɔ ma henanom?
Ntease a yɛwɔ ne sɛ, wogyina hɔ ma ɔsoro asafodɔm a wɔhwɛ ma wɔsɛee Yerusalem no. Wɔka ho bi na wɔde Harmagedon sɛe no bɛba. Ɛnnɛ, ɔbarima a ɔkyerɛwfo toa bɔ n’asen no gyina hɔ ma Yesu Kristo a ɔbɛhyɛ wɔn a wobenya daa nkwa no agyirae no.​—w16.06, kr. 16-17.
Ɔhaw ahorow bɛn na antumi ansɛe Bible no?
Ɔhaw a antumi ansɛe Bible no bi ni: (1) Ná mmɛw krataa ne aboa nhoma a wɔkyerɛw so no betumi asuw anaa atetew; (2) atumfoɔ ne nyamesom akannifo yɛɛ wɔn adwene sɛ wɔbɛsɛe no; ne (3) ebinom bɔɔ mmɔden sɛ wɔbɛsesa emu nsɛm no.​—wp16.4, kr. 4-7.
Nneɛma bɛn na Kristoni bɛyɛ de ayɛ ne ho awiɛmfoɔ?
Hu nea wuhia ankasa, na nsɛe sika sɛnea ɛnsɛ. Yɛ sikasɛm ho nhyehyɛe a ɛfata. Tow nneɛma a wunhia gu, tɔn, anaa fa kyɛ, na tuatua wo ho aka biara. Tew bere a wode yɛ honam fam adwuma so, na yɛ nhyehyɛe fa trɛw wo som adwuma mu.​—w16.07, kr. 10.
Dɛn na Bible ka sɛ ɛsom bo sen sika kɔkɔɔ anaa dwetɛ?
Hiob 28:12, 15 ma yehu sɛ Onyankopɔn nyansa som bo sen sika kɔkɔɔ anaa dwetɛ. Enti sɛ worehwehwɛ a, bɔ mmɔden brɛ wo ho ase, na ma wo gyidi nyɛ den.​—w16.08, kr. 18-19.
Ɛnnɛ, ɛfata sɛ onuabarima bi gyaw abogyesɛ anaa?
Mmeae bi wɔ hɔ a, ebia ɛhɔfo bu abogyesɛ a wɔatwitwa so fɛfɛɛfɛ sɛ ade a nidi wom, na ɛnyɛ ade a ɛremma nkurɔfo ntie Ahenni ho asɛmpa no. Nanso, ebia anuanom binom beyi wɔn de. (1 Kor. 8:9) Mmeae bi nso, mmarima nnyaw abogyesɛ, na wobu no sɛ ɛmfata sɛ Kristofo begyaw abogyesɛ.​—w16.09, kr. 21.
Adɛn nti na yebetumi agye adi sɛ Dawid ne Goliat ho asɛm a ɛwɔ Bible mu no yɛ nokware?
Nnansa yi mpo, nipa a wɔahu sɛ ɔware paa wɔ wiase nyinaa no, Goliat tenten boro ne de so sɛntimita 15 pɛ. Dawid yɛ onipa a ɔtenaa ase ankasa. Wɔn a wotutu fam hwehwɛ tetefo nneɛma mu ahu ɔbo bi a wɔakyerɛw so “Dawid fie.” Bio nso, Yesu Kristo kaa Dawid ho asɛm sɛ ɔyɛ onipa a ɔtenaa ase ankasa. Asase ho nsɛm ho kyerɛwtohɔ a ɛwɔ hɔ ne nokwasɛm a wogye tom hyia.​—wp16.5, kr. 13.
Ɔkwan bɛn so na ɛsono nyansa, ɛnna ɛsono nimdeɛ ne ntease?
Obi a ɔwɔ nimdeɛ boaboa nsɛm ano. Obi a ɔwɔ ntease tumi hu sɛnea asɛm bi fa asɛm foforo ho. Nanso, obi a ɔwɔ nyansa de, otumi de nimdeɛ ne ntease bom yɛ adwuma ma mfaso ba so.​—w16.10, kr. 18.
So Wokae?—December 2016